1st April 2017 GroundUpEast London, Edition 14, Ezemidlalo 0 Xhosa
Omnye wababethathe inxaxheba kule tumente u Lincoln Matli. Photo supplied
uSikelela Kakele oneminyaka engama-25 ubudala waseMdantsane usebenza njengonogada wabantu abaqubhayo ngamaxesha athile onyaka.
Ukwangumqeqeshi olivolontiya kwiziko lokuzilolonga lasekuhlaleni. Uye walugqiba ugqatso lwe-Ironman, kodwa wachaza iingxaki anazo ekuthatheni inxaxheba kule migqatso. “Omnye umngeni endinawo umalunga nokuzilolonga. Kufuneka nditye ukutya okukodwa ukuze ndiqhube kakuhle kugqatso ngalunye kodwa ke andikwazi ukufikelela kuko ngokwezemali. Ngenxa yoko ke ndibanjwe zinkantsi kulo lonke olu gqatso,” uchaze watsho.
Kokwesithathu engenela olu gqatso lwe-Ironman.
Uthe uye wakulungela kabini ukungenela ukhuphiswano lweentshatsheli lehlabathi kodwa akakwazi ukuya ngenxa yokungabikho kwemali yesibonelelo. Kulo nyaka uye wakulungela okwesithathu ukungena kukhuphiswano lweentshatsheli loMzantsi.